राजेश हमाल किन यसरी फेरिए ? - Sutra TV Sutra TV
राजेश हमाल किन यसरी फेरिए ?
२ दिन अघि अभिनेता राजेश हमालले प्रेमगीत ३ सिनेमा खेल्ने भनेर खबर आएको थियो । अभिनेता राजेश हमालले प्रेमगीतमा अभिनेता प्रदिप खड्काको बाबुको भूमिकामा काम गर्ने खबर आयो । हमालसँग विगत केही महिनादेखि निर्माता सन्तोष सेन छलफलमा थिए । अभिनेता प्रदिप खड्का पनि हमाललाई मनाउन लागेका थिए ।
हमालले प्रेमगीत ३ खेल्ने भनेर खबर आएको २ दिन वित्न नपाउँदै उनले फिल्म नखेल्ने खबर आएको छ । हमालले आफ्नो सेड्यूल नमिलेका कारण सिनेमा नखेल्ने बताएका छन् । अभिनेता राजेश हमालले प्रेमगीत ३ सेड्यूल मिलेन भनेर छाडेपनि कारण अरु हुनसक्छन् । निर्माता सन्तोष सेनले यसलाई धोका भनेका छन् ।
नेपाली फिल्ममा अभिनेता राजेश हमालको नाम पुरानो छ । अभिनेता राजेश हमालले ३ सय बढी फिल्म खेलेका छन् । आज भन्दा ५ बर्ष अघि मात्र पनि अभिनेताले अफर आएका सबै सिनेमा खेल्थे । हमालले कथा, ब्यानर, भूमिका केही हेरेका थिएनन् । अभिनेता हमालको काम गराई नेपाली फिल्म मेकरका लागि दिक्क लाग्ने कुरा थियो । किनकी, राजेशले सिनेमा छनौट नगर्दा उनलाई लिएर फिल्म जस्ता निर्देशकले पनि बनाए । यतिसम्म कि, हमालकै कारण निर्देशन नै गर्न नजान्नेहरु पनि निर्देशक भए ।
तर, अहिले हमाल फेरिएका छन् । ५ बर्ष अघि प्रेमगीत ३ बन्थ्यो भने हमालले गर्थे । उनले भूमिका केही पनि हेर्दैनथ्य । मात्र उनले पारिश्रमिक हेर्थे । तर, शकुन्तला, बागमती जस्ता फिल्म पूर्ण रुपमा असफल भएपछि हमाल हच्किएका थिए । यी दुबै फिल्मबाट उनलाई आशा थियो । हमाल अहिले पनि उस्तै लोकप्रिय छन् । उनको छवि देश तथा विदेशमा छ । नेपाली फिल्ममा राजेश हमालको स्थानमा कुनै पनि कलाकार पुग्न सकेका छैनन् ।
हमाल यही क्रेजलाई अब बचाउन चाहन्छन् । उनले को बन्छ करोडपति जस्तो शो संचालन गरे । यो शोले पनि उनको क्रेज बढाइदियो । हमाल यी कुराहरुका कारण पनि अब फिल्मबाट आफ्नो क्रेज गुमाउन चाहन्नन् । उनले आफै पनि निर्देशक बन्ने सोच बनाएका छन् । तर, उनले बनाउने भनेको सिनेमा कहिले बन्छ थाहा छैन । तर, हमालले सिनेमा निर्देशन गर्ने भनेको धेरै नै भैसक्यो ।
अभिनेता राजेश हमालले प्र्रेमगीत ३ किन गरेनन्, यो उनलाई नै थाहा होला । तर, हमालले प्रेमगीत ३ मा काम नगर्नुले उनको फेरिएको स्वभाव भनेर वुझिएला । किनकी, पहिले राजेश हमाल यस्ता थिएनन् । तर, उनलाई के कुराले परिवर्तन गर्न वाध्य बनायो होला ?
कार्तिक २२ मा झमक घिमिरेको ‘जीवन काँडा कि फूल’
‘लभ यु हमेशा’ ट्रेलर रिलिज, फेसबुकमा ‘लभ यु हमेशा’को प्रोफाइल फ्रेम राखे नगद पुरस्कार
‘बादशाह जुट’को ‘सुसाइड सङ’ सार्वजनिक
प्रदीपको ‘समय पर्खिदैन’ रिलिज
टेलिशृंखला ‘हिजो आजका कुरा’को नेम ट्यागमा फिल्म बनाउदै सन्तोष पन्त